ဆရာတော်က အရှင်ဆန္ဒာဓိက ကမေးတယ် “ဒကာကြီးနေတိုး ငိုပြီးသွားပလား” တဲ့ နေတိုးက ပြန်ဖြေရှာတယ်…. – ရှအေလငျး
ဆရာတော်က အရှင်ဆန္ဒာဓိက ကမေးတယ် “ဒကာကြီးနေတိုး ငိုပြီးသွားပလား” တဲ့ နေတိုးက ပြန်ဖြေရှာတယ်….
သရုပ်ဆောင် မင်းသွေးတစ်ယောက် လောကကြီးထဲကနေထွက်ခွာသွားခဲ့ပေမယ့် ခုချိန်ထိ မိသားစုဝင်တွေ လက်မခံချင်သေးလောက်အောင်ပါပဲ။ လာမယ့် တနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့ မင်းသွေးရဲ့ ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ ရုပ်ကလာပ်ကို သဂြိုလ်ကြတော့မှာပါ။ မင်းသွေးကိုချစ်ကြတဲ့ မိသားစုဝင်တွေနဲ့ ပရိသတ်ကြီးကိုအပြီးအပိုင်နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားတော့မှာပါ။
နှုတ်ဆက်ဝမ်းနည်းစာတွေ ပြည့်နှက်နေတဲ့ လူမှုကွန်ယက်ပေါ်က အဖြစ်အပျက်တွေကိုလည်း မင်းသွေးတစ်ယောက်မမြင်နိုင်တော့ပါဘူး။ အနုပညာလောကနဲ့ ဂီတလောကမှာပါ ကျင်လည်ခဲ့တဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်တာမို့ အနုပညာမောင်နှမတွေရဲ့ ဝမ်းနည်းစာတွေလည်း မြင်ရတာ ရင်ထဲမကောင်းလောက်အောင်ပါပဲ။ ဒါရိုက်တာသြရသကတော့ မင်းသွေးကြည့်ချင်တဲ့ မုန်းစွဲ ဇာတ်ကားကို မပြပေးလိုက်ရလို့ နောင်တရနေတဲ့အကြောင်းလေးကို ရင်နင့်စဖွယ်ရေးထားပါသေးတယ်။
“မင်းသွေးရေ…အစကတော့ မရေးတော့ဘူးလို့နေတာ ခုတော့ မနေနိုင်လို့ရေးလိုက်တယ်..။ဟိုတလောက မင်းငါ့ဆီဖုန်းဆက်တယ်နော်..။”ဒါရိုက်တာကြီး မုန်းစွဲကြည့်ချင်လို့”တဲ့..။ ငါက “မအားသေးဘူး သစ္စာချည်တိုင် ရိုက်နေလို့ ကားရိုက်ပြီးသွားရင် တစ်ရက်ချိန်းပြီး ပြမယ်” လို့ဖြေခဲ့တယ်..။ ငါ့ကားရိုက်က ၂ ရက်နေ့မှာပြီးတယ်..။မင်းက ၃ ရက်နေ့မှာ အားလုံးကိုနှုတ်မဆက်ပဲ အပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်..။ငါ တာဝန်မကျေသလိုခံစားရတယ်ကွာ ။မနက်ဖြန်ထက် နောက်ဘဝကပိုနီးတယ်ဆိုတာ ငါတို့အားလုံးကို မင်းအသက်နဲ့ရင်းပြီးသက်သေပြသွားခဲ့သလားကွာ..။အရီးကတော့ အရမ်းငိုတယ်ကွာ ။သူ့အတွက် ကမ္ဘာပျက်နေတာပေါ့..။ပြီးတော့ ဦးလေး နဲ့ မင်းအစ်ကို ..။သူတို့ကတော့ ရင်ထဲမှာကြိတ်ငိုနေကြတယ်..။ လာတဲ့လူတွေလည်း ဧည်ခံစီမံရင်းပေါ့..။
ရင်ထဲကဆန္ဒကို မျိုသိပ်ပြီး ကြိတ်မှိတ်ခံစားနေရတာ ပိုပင်ပန်းမယ်လို့ ငါ ထင်တယ်..။မနေ့က မင်းရဲ့ရက်လည်ကိစ္စအတွက် ဆရာတော်အရှင်ဆန္ဒာဓိက ဆီကို ငါရယ်၊မင်းအစ်ကိုရယ်၊ ကိုလွင်မင်းအံ့ရယ် ရောက်ခဲ့ကြတယ်..။ ဆရာတော်ကမေးတယ် “ဒကာကြီးနေတိုး ငိုပြီးသွားပလား” တဲ့ ။မင်းအစ်ကို ကိုလူအေးက ဖြေရှာတယ် “မငိုရသေးပါဘူးဘုရား..တပည့်တော် တင်းခံထားပါတယ်” တဲ့ ..။ငါ့ဖြင့်ဘေးကနေကြားရလိုက်ရတာ ကြက်သီးတောင်ထတယ်ကွာ..တကယ်ဟတ်ထိလွန်းလို့ပါ..။ဆရာတော်က “ဒကာကြီးငိုစရာတွေ့လို့ငိုဖို့ကြုံလာရင် ငိုလိုက်ပါ တင်းခံမထားပါနဲ့ ပင်ပန်းလွန်းလှပါတယ်..ပြီးတော့ အားရပါးရငိုရင်းနဲ့မှ အကျိုးအကြောင်းသုံးသပ်ဆင်ခြင်ပါ “ဆိုပြီး ဖြေဆည်စရာတရားတော်တွေကိုဟောပါတယ် ။
အပြန်လမ်းတလျှောက် ငါ့ကားပေါ်မှာ မင်းအစ်ကို ကိုလူအေးဟာ သက်ပြင်းရှည်ကြီးတွေကို အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ ခပ်စိတ်စိတ်ချရင်းပါလာတယ် ။ ငါကြားဖူးသမျှသက်ပြင်းချသံတွေထဲမှာတော့ အကျယ်လောင်ဆုံးပါပဲ ။ ငါလည်းဆရာတော်လို ငိုလိုက်ပါလားလို့ ပြောလိုက်ချင်ပေမယ့် ပြောမထွက်တော့ပါဘူးကွာ ။ဒါနဲ့ “နေတိုးခဏဖြစ်ဖြစ်အိပ်လိုက်ပါလား” လို့ပြောတော့ သူအိပ်ရှာတယ် ။ ငါးမိနစ်လောက်နေတော့ ဆတ်ခနဲလန့်နိုးလာပြီး ပြန်အိပ်သွားတယ် ။ နောက်ဆယ်မိနစ်လောက်နေတော့ ပြန်လန့်နိုးလာပြန်ရော ။ အင်းပေါ့လေ သူ့ကိုလည်း မယုံနိုင်စရာအိပ်မက်ဆိုးကြီးက ခြောက်လှန့်နေမှာပေါ့ ။
ငါ အရီးတော့မတွေ့ရက်လို့ ဝင်မတွေ့ဖြစ်ဘူးကွာ ။ အရီးက အရမ်းသနားဖို့ကောင်းပါတယ် ။ တချိန်လုံးငိုနေတော့တာ ။ ဟိုတလောက ကြောက်ကြောက်ကြောက် ၂ ရိုက်မယ်ဆိုတော့ ငါ့ကိုလှမ်းမေးတယ် ။ “ကျော်ထွန်း ညီလေးငယ်ရောပါလား ” တဲ့ ။ ငါ လည်း “မပြောတတ်သေးဘူးအရီး သေချာမသိရသေးဘူး” လို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ် ။ ခုနေ ငါ့ တွေ့လို့ ညီလေးငယ် ကို ကားရိုက်ခေါ်ဦးလေ ဆိုရင် ငါ ဘယ်လိုဖြေရမလဲကွာ ။
မင်းသွေးရေ..ကြောက်ကြောက်ကြောက် ရိုက်တုန်းက”ဘဲကြီး ဒီကားရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျက ဘာလဲ”လို့ မင်းမေးတော့ ငါက “သေခြင်းတရားဟာ လူတစ်ယောက်ဆီကို သူအပျော်ရွှင်ဆုံးအချိန်မှာလည်း ရောက်လာတတ်တယ် ဆိုတာကိုပြတာပါ” လို့ဖြေခဲ့တယ် ။ ခု မင်းပျော်ရွှင်ပေါ့ပါးနေတဲ့အချိန်မှာ သူဟာရောက်လာခဲ့ပြီ ။ ငါတို့အားလုံးဆီကို ဘယ်အချိန်ရောက်လာဦးမယ် ဆိုတာဘယ်သူမှ မသိနိုင်ကြဘူး ။ တကယ်လို့ ဆိုင်းမဆင့်ဗုံမဆင့်ရောက်လာခဲ့ရင်..တခြားသူတွေတော့မပြောတတ်ဘူးးငါတော့ အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးကွာ ။တကယ်က ငါဟာ “သိမိုက်”တစ်ယောက်ပါ ။ မင်းပေးသွားတဲ့ သင်ခန်းစာကို ငါ အမြတ်ထုတ်နိုင်အောင် ကြိုးစားရဦးမယ် ။
မင်းသွေးရေ..မင်းရဲ့လက်သုံးစကား “အဓိပ္ပါယ်မဲ့တယ်ကွာ” ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေ မသုံးနှုန်းရတဲ့ ဘဝသစ်မှာ ရှင်သန်ပျော်ရွှင်ပါစေကွာ ။ငါ့ရဲ့ ထူးမော်(Min Thway)ကိုအမြဲသတိရနေမှာပါ ။
မင်းရဲ့ကိုကျော်ထွန်း(ခ)ဘဲကြီး(ခ) ဒါရိုက်တာ သြရသ” အရမ်းရင်နင့်ဖွယ်ကောင်းလိုက်တဲ့စာလေးပါ။ We Love Cele
သရုပျဆောငျ မငျးသှေးတဈယောကျ လောကကွီးထဲကနထှေကျခှာသှားခဲ့ပမေယျ့ ခုခြိနျထိ မိသားစုဝငျတှေ လကျမခံခငျြသေးလောကျအောငျပါပဲ။ လာမယျ့ တနင်ျဂနှနေမှေ့ာတော့ မငျးသှေးရဲ့ ကနျြရှိနသေေးတဲ့ ရုပျကလာပျကို သဂွိုလျကွတော့မှာပါ။ မငျးသှေးကိုခဈြကွတဲ့ မိသားစုဝငျတှနေဲ့ ပရိသတျကွီးကိုအပွီးအပိုငျနှုတျဆကျထှကျခှာသှားတော့မှာပါ။
နှုတျဆကျဝမျးနညျးစာတှေ ပွညျ့နှကျနတေဲ့ လူမှုကှနျယကျပျေါက အဖွဈအပကျြတှကေိုလညျး မငျးသှေးတဈယောကျမမွငျနိုငျတော့ပါဘူး။ အနုပညာလောကနဲ့ ဂီတလောကမှာပါ ကငျြလညျခဲ့တဲ့သူတဈဦးဖွဈတာမို့ အနုပညာမောငျနှမတှရေဲ့ ဝမျးနညျးစာတှလေညျး မွငျရတာ ရငျထဲမကောငျးလောကျအောငျပါပဲ။ ဒါရိုကျတာသွရသကတော့ မငျးသှေးကွညျ့ခငျြတဲ့ မုနျးစှဲ ဇာတျကားကို မပွပေးလိုကျရလို့ နောငျတရနတေဲ့အကွောငျးလေးကို ရငျနငျ့စဖှယျရေးထားပါသေးတယျ။
“မငျးသှေးရေ…အစကတော့ မရေးတော့ဘူးလို့နတော ခုတော့ မနနေိုငျလို့ရေးလိုကျတယျ..။ဟိုတလောက မငျးငါ့ဆီဖုနျးဆကျတယျနျော..။”ဒါရိုကျတာကွီး မုနျးစှဲကွညျ့ခငျြလို့”တဲ့..။ ငါက “မအားသေးဘူး သစ်စာခညျြတိုငျ ရိုကျနလေို့ ကားရိုကျပွီးသှားရငျ တဈရကျခြိနျးပွီး ပွမယျ” လို့ဖွခေဲ့တယျ..။ ငါ့ကားရိုကျက ၂ ရကျနမှေ့ာပွီးတယျ..။မငျးက ၃ ရကျနမှေ့ာ အားလုံးကိုနှုတျမဆကျပဲ အပွီးထှကျသှားခဲ့တယျ..။ငါ တာဝနျမကသြေလိုခံစားရတယျကှာ ။မနကျဖွနျထကျ နောကျဘဝကပိုနီးတယျဆိုတာ ငါတို့အားလုံးကို မငျးအသကျနဲ့ရငျးပွီးသကျသပွေသှားခဲ့သလားကှာ..။အရီးကတော့ အရမျးငိုတယျကှာ ။သူ့အတှကျ ကမ်ဘာပကျြနတောပေါ့..။ပွီးတော့ ဦးလေး နဲ့ မငျးအဈကို ..။သူတို့ကတော့ ရငျထဲမှာကွိတျငိုနကွေတယျ..။ လာတဲ့လူတှလေညျး ဧညျခံစီမံရငျးပေါ့..။
ရငျထဲကဆန်ဒကို မြိုသိပျပွီး ကွိတျမှိတျခံစားနရေတာ ပိုပငျပနျးမယျလို့ ငါ ထငျတယျ..။မနကေ့ မငျးရဲ့ရကျလညျကိစ်စအတှကျ ဆရာတျောအရှငျဆန်ဒာဓိက ဆီကို ငါရယျ၊မငျးအဈကိုရယျ၊ ကိုလှငျမငျးအံ့ရယျ ရောကျခဲ့ကွတယျ..။ ဆရာတျောကမေးတယျ “ဒကာကွီးနတေိုး ငိုပွီးသှားပလား” တဲ့ ။မငျးအဈကို ကိုလူအေးက ဖွရှောတယျ “မငိုရသေးပါဘူးဘုရား..တပညျ့တျော တငျးခံထားပါတယျ” တဲ့ ..။ငါ့ဖွငျ့ဘေးကနကွေားရလိုကျရတာ ကွကျသီးတောငျထတယျကှာ..တကယျဟတျထိလှနျးလို့ပါ..။ဆရာတျောက “ဒကာကွီးငိုစရာတှလေို့ငိုဖို့ကွုံလာရငျ ငိုလိုကျပါ တငျးခံမထားပါနဲ့ ပငျပနျးလှနျးလှပါတယျ..ပွီးတော့ အားရပါးရငိုရငျးနဲ့မှ အကြိုးအကွောငျးသုံးသပျဆငျခွငျပါ “ဆိုပွီး ဖွဆေညျစရာတရားတျောတှကေိုဟောပါတယျ ။
အပွနျလမျးတလြှောကျ ငါ့ကားပျေါမှာ မငျးအဈကို ကိုလူအေးဟာ သကျပွငျးရှညျကွီးတှကေို အကွိမျကွိမျအခါခါ ခပျစိတျစိတျခရြငျးပါလာတယျ ။ ငါကွားဖူးသမြှသကျပွငျးခသြံတှထေဲမှာတော့ အကယျြလောငျဆုံးပါပဲ ။ ငါလညျးဆရာတျောလို ငိုလိုကျပါလားလို့ ပွောလိုကျခငျြပမေယျ့ ပွောမထှကျတော့ပါဘူးကှာ ။ဒါနဲ့ “နတေိုးခဏဖွဈဖွဈအိပျလိုကျပါလား” လို့ပွောတော့ သူအိပျရှာတယျ ။ ငါးမိနဈလောကျနတေော့ ဆတျခနဲလနျ့နိုးလာပွီး ပွနျအိပျသှားတယျ ။ နောကျဆယျမိနဈလောကျနတေော့ ပွနျလနျ့နိုးလာပွနျရော ။ အငျးပေါ့လေ သူ့ကိုလညျး မယုံနိုငျစရာအိပျမကျဆိုးကွီးက ခွောကျလှနျ့နမှောပေါ့ ။
ငါ အရီးတော့မတှရေ့ကျလို့ ဝငျမတှဖွေ့ဈဘူးကှာ ။ အရီးက အရမျးသနားဖို့ကောငျးပါတယျ ။ တခြိနျလုံးငိုနတေော့တာ ။ ဟိုတလောက ကွောကျကွောကျကွောကျ ၂ ရိုကျမယျဆိုတော့ ငါ့ကိုလှမျးမေးတယျ ။ “ကြျောထှနျး ညီလေးငယျရောပါလား ” တဲ့ ။ ငါ လညျး “မပွောတတျသေးဘူးအရီး သခြောမသိရသေးဘူး” လို့ပွနျဖွခေဲ့တယျ ။ ခုနေ ငါ့ တှလေို့ ညီလေးငယျ ကို ကားရိုကျချေါဦးလေ ဆိုရငျ ငါ ဘယျလိုဖွရေမလဲကှာ ။
မငျးသှေးရေ..ကွောကျကွောကျကွောကျ ရိုကျတုနျးက”ဘဲကွီး ဒီကားရဲ့မကျဆခြေျ့က ဘာလဲ”လို့ မငျးမေးတော့ ငါက “သခွေငျးတရားဟာ လူတဈယောကျဆီကို သူအပြျောရှငျဆုံးအခြိနျမှာလညျး ရောကျလာတတျတယျ ဆိုတာကိုပွတာပါ” လို့ဖွခေဲ့တယျ ။ ခု မငျးပြျောရှငျပေါ့ပါးနတေဲ့အခြိနျမှာ သူဟာရောကျလာခဲ့ပွီ ။ ငါတို့အားလုံးဆီကို ဘယျအခြိနျရောကျလာဦးမယျ ဆိုတာဘယျသူမှ မသိနိုငျကွဘူး ။ တကယျလို့ ဆိုငျးမဆငျ့ဗုံမဆငျ့ရောကျလာခဲ့ရငျ..တခွားသူတှတေော့မပွောတတျဘူးးငါတော့ အဆငျသငျ့မဖွဈသေးဘူးကှာ ။တကယျက ငါဟာ “သိမိုကျ”တဈယောကျပါ ။ မငျးပေးသှားတဲ့ သငျခနျးစာကို ငါ အမွတျထုတျနိုငျအောငျ ကွိုးစားရဦးမယျ ။
မငျးသှေးရေ..မငျးရဲ့လကျသုံးစကား “အဓိပ်ပါယျမဲ့တယျကှာ” ဆိုတဲ့ စကားလုံးတှေ မသုံးနှုနျးရတဲ့ ဘဝသဈမှာ ရှငျသနျပြျောရှငျပါစကှော ။ငါ့ရဲ့ ထူးမျော(Min Thway)ကိုအမွဲသတိရနမှောပါ ။
မငျးရဲ့ကိုကြျောထှနျး(ခ)ဘဲကွီး(ခ) ဒါရိုကျတာ သွရသ” အရမျးရငျနငျ့ဖှယျကောငျးလိုကျတဲ့စာလေးပါ။ We Love Cele
“အူတက်အောင်ခွီနေရမယ့် လေးဖြူဆိုထားတဲ့ “တကျော့နှစ်ကျော့တေးကိုသီ” သီချင်း”
“ချဉ်ပေါင်ဟင်းဆိုရင် သိပ်ကြိုက်လို့ စားသာ စားနေခဲ့တာ အခုလို မသိခဲ့ဘူး…။”
ခွေးတွေကို …လမ်းမပေါ် အစာကျွေးရင်… ထောင်ချတဲ့အထိ…...
“ကုံလုံ ဆရာတော်ကြီး၏ …ရုပ်ကလာပ်ကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရင်း...
ဧရာမသင်္ဘောကြီးကို ဆွဲပြကာ ကမ္ဘာ့ စံချိန်သစ်တင်လိုက်သည့် ရုရှားလူသန်ကြီး !!!
မနက်ဖြန်မှာ မိတ်ဆက်မယ့် Xiaomi Mi Mix 2S ဖုန်း အကြောင်း။